Monday November 19, 2018 - 09:00:23 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa ku dhaliilay dowladda dhexe ee Soomaaliya in aysan tanaasul u muujinin maamul goboleedyadda markii uu yimid Khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadda.
Waxaa uu sheegay in dib dhac weyn uu dalka ku yimid tan iyo markii uu bilowday Khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadda.
Dowladda dhexe ayuu ku dhaliilay in ay la xifaaltantay maamul goboleedyadda oo aysan sameyn Wadiiqo lagu wadda hadlikaro si loo soo Afjaro Khilaafka taagan.
Cali Maxamed Geedi oo hadda ku sugan Magaalada Kismaayo ayaa sidoo kale Bogaadiyay horumaro uu sheegay in maamulka Jubbaland aysan ka sameeyeen Magaalada Kismaayo.
Waxaa uu xusay in maamulada in ay xaq u leeyihiin in dowladda dhexe la xisaabtamaan ,maadaama ay matalaan gobolo iyo Shacab doortay Madaxda maamulada.